﻿ကျပ်တစ်သိန်းရှစ်သောင်းတန် GSM ဖုန်းများ မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် စတင်ချပေးမည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ﻿ကျပ်တစ်သိန်းရှစ်သောင်းတန် GSM ဖုန်းများ မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် စတင်ချပေးမည်
﻿ကျပ်တစ်သိန်းရှစ်သောင်းတန် GSM ဖုန်းများ မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် စတင်ချပေးမည်
Posted by blacklover on Feb 28, 2012 in Myanma News | 23 comments
ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများကို မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တို့တွင်စတင်ချပေးမည် ငွေကျပ် တစ်သိန်း ရှစ်သောင်း တန် ဂျီအက်စ်အမ် ဖုန်းများကို လာမည့်မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တို့တွင် စတင် ချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
”အခုလာမယ့် မတ်လ ၅ ရက်နေ့မှာ နေပြည်တော်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့တွေမှာ ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းတွေ စပြီး ချပေးသွားမယ်။ တန်ဘိုး ကတော့ ငွေကျပ်တစ်သိန်းရှစ်သောင်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ချပေးမယ့် အလုံးအရေအတွက်ကိုတော့ အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး” ဟု နေပြည်တော် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံမှ စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။ လာမည့် မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် စတင်ချပေးမည့် ဂျီအက်စ် အမ်ဖုန်း များ၏ နံပါတ်ကို ၀၉-၄၂ နံ ပါတ်ဖြင့် ချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ငွေကျပ် ၁၅ သိန်းတန် စီဒီအမ်အေဖုန်းများကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း စတင်ချထားပေးခဲ့ပြီး ငွေကျပ် ငါးသိန်းတန် စီဒီအမ်အေဖုန်းများနှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်ချထားပေးခဲ့ပြီး ငွေကျပ် ငါးသိန်းတန် ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများကိုလည်း ချထားပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယခုအခါ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မတ်လ ၅ရက်နေ့တွင် ငွေကျပ်တစ်သိန်းရှစ်သောင်းတန် ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများကို နေပြည်တော်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တို့တွင် စတင် ချထားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဲသတင်းလေး ရိုးရာလေးမှာရော ညီသစ်ထူးမှာပါ ဖတ်ရပါတယ်အဲဒါတကယ်လားဟင် ရန်ကုန်နေပြည်တော်က 5ရက်နေ့ဆို မန်းလေးကဘယ်တော့ကြားမိကြလဲမသိဘူး……..
မဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့ဗျာ။သူတို့ ကိုသင်တန်းပေးမယ့် ကျောင်းအုပ်ကြီးက အတိအကျမသိရသေးဘူး
မန္တလေးဆို ဘာလို့ နောက်ကျကျနေရတာလဲမသိဘူး
တစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆို မန်းလေးမပါဘူး ..
မကိုင်နိုင်သေးဘူး 5000 ပဲစောင့်မယ် ဒါပဲ
ထိုင်းနိုင်ငံမှာလို ဟန်းဆက်ဝယ်ရင် ဆင်းကတ် အလကားပေးတဲ့
ပါးပါးလှီးပြီး ရောင်းတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့ဗျာ … ။
နောက်ဟာ ပေါ်လာတော့ ရှေ့ကဟာတွေက ဈေးကြီးပေးခဲ့ရပြီး ဘာမှ မဟုတ်တော့ ပြန်သလို ။
အင်း .. ဒီလိုသာ ရှေ့ဆက်သွားရင် လွယ်ပါဘူးဗျာ … ။
သူများ နိုင်ငံတွေလို ဆင်းရဲသားကအစ ဟန်းဖုန်း ကိုင်နိုင်အောင် ပြောင်းချလိုက်ပါ့လား … ။
တော်တော်ကို ငတ်ကြီးကျတဲ့ ဟာတွေ … ။
အခု တစ်သိန်း ရှစ်သောင်း ပြီးရင် နောက်ထပ် ဘယ်လောက်တန် ထပ်လာဦးမလဲ မသိဘူး … ။
ကိုရွှေဘိုသား လိုပဲ ငါးထောင်တန်ပဲ စောင့်တော့မယ် .. ။ ဒါဗြဲ …
ကျွန်တော်တို့ဆီက ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံကို မေးကြည့်တော့ ၂ သိန်း ၂ သောင်းလို့ ပြောတယ်။ ဘာကွာ လို့လဲဟင်။ ၅၀၀၀ တန်ပဲ စောင့်ရင်ကောင်းမလား ။ ဆင်းကဒ် အလကားပေးတဲ့ အချိန်မှ ယူရင်ကောင်းမလား။
၃ သိန်း၊ နောက် ၂ သိန်း ၈ သောင်း၊ နောက် ၂ သိန်းခွဲ၊ နောက် ၂ သိန်း၊ နောက် ၁ သိန်း ၈ သောင်း။ အောင်မယ်ငီး ၀ဘီလိုဆုံးဖြတ်ရမှာလဲ။ မီရောင်းရတေးဘူး။ ၀တလျှော့ထဲလျှော့နေရတာ။ ၀တော့မွဲပါဘီ။ ၅ ထောင်သာဝင်မီလာရင် ၀တော့ ၃ သိန်းနဲ့ထောပြီ။ အီခုလဲ ၁ သိန်း ၈ သောင်းကိုမီဝယ်ရင်ဝဘီလိုလုပ်ရမီလဲ။ ထပ်လျှော့ရင်တော့ဝဘောင်းဘီကျွတ်တော့မယ်။
“ကျတဲ့လွန်းတဲ့စိတ်ဓါတ် အ၀ီစိထိဆင်းဘို့ကျင့်ကြံနေသောခါ ရောဂါ”
အိမ်း ပြောရပြန်ရင်တော့ ကောင်းတော့ပါဝူးအေ………အခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုးနဲ့……….. ဘယ်သူမှ လွန်ဘူး………….တို့ပဲလွန်တာဟေ့……….ပေးပေးပေး ငါ့ GSM ပေး…….. မပေး ပေးပေး ပေးပေးပေး ငါ့ GSM ပေး ………တွားပီ သူရဇော် ကြောင်သွားပီ…….. မင်းကိုဒါကြောင့်ပြောတယ် မမျှော်ပါနဲ့ဆို…
ထွက်မထွက်တော့ မသိဘူး ခုလေးပဲ ငါးထောင်ထွက်သွားတယ် အကြွေးဆပ်လိုက်လို့ အိတ်ထဲကငါးထောင်
*NEW FACTORY Unlocked* Samsung SGH A107 Gray/Silver No-Contract WORLDWIDE GSM
Unlocked လုပ်ခိုင်းပြီး ၀ယ်ထားပါတယ်..။ အခုတင်ဝယ်လိုက်တာပါ..။ ပစ္စည်းလက်ထဲမရောက်လာသေးပါဘူး..။
ပြောတာကတော့.. 850/1900 MHz GSM band network within the U.S. and Worldwide သုံးလို့ရတယ်တဲ့..။
အခုမတ်လဆန်းမှာ.. ချပေးတဲ့ဖုန်းအနေနဲ့.. သုံးလို့ရမယ်ထင်တယ်..။
မြန်မာနယူးရီးယားမှာ.. ရွာသူားထဲက.. တယောက်ယောက်ကို..လက်ဆောင်ပေးချင်ပါတယ်..။
ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ..
ကိုခိုင် က သများမြင်ဖူးသမျှ သဂျီးတွေထဲမှာ အချောဆုံးဘဲနော်….
ဒီက သူ့ကိုအရမ်းခင်တာ သိလားးးးး
(ဟုတ်တာ မဟုတ်တာအသာထား ခုထဲကဖါးထားမှ):)
သူများနိုင်ငံများ ဖုန်းဘယ်လောက်ပေါလဲ အင်္ဂလန်က အစ်ကိုဆီမှာ ဖုန်းခွံတွေ အများကြီး update မဟုတ်လို့ မသုံးတာတဲ့ ။ ပျောက်လို့ ရိုက်ခွဲလို့ အေးဆေးပဲ။(ကိုရီးယားကာထဲပြောတာပါ။) အပိုသုံး အနေနဲ့သုံးတာ။ ဒီမှာတော့ ပျောက်သွားရင် အသဲသန်လိုင်းပြန်လျှောက်ရ နဲ့ ငိုမဲမဲ့နေရတဲ့ ဘ၀ပါလားနော်။ hand set ဈေးကလဲ ကြီးမှကြီး။ အဟင့်ဟင့် အဖြစ် ဆိုးလှချည့် ..
အခု နေပြည်တော်မှာ တန်ဖိုးနည်းဖုန်းတွေ ချက်ချင်းဝယ်လို့ ရပြီတဲ့.. အခုဘဲအသိတစ်ယောက် ၀ယ်လိုက်တယ် အချိန်က 1နာရီ ဈေးနှုန်းက 2သိန်းအတိတဲ့..သူက အစိုးရ၀န်ထမ်းတဲ့.. အဲဒါလေးပါ ထည့်ပြောပြတာ..
ဟဲ ဟဲ အဲဒါပြောတာပေါ့။
ဟေ့ မောင် -ဟိုဒင်း – ကလေး မင်းလည်းမနစ်နာအောင်၊သူလည်းရသွားရအောင်လေ—-၊
မင့် တစ်သိန်းရှစ်သောင်းတန် အရင်ချလကွာအလုံး အဲ အလုံးရေက ———– လောက်ပေါ့။
ဟေ့ မောင်ရှစ်လုံးသားကလေးလည်း ရပါစေလကွယ်၊ သူ့လည်း အလှည့်ပေးရမပေါ့ အလုံး—— လောက်။
အေးပြည်သူတွေလည်း သူသုံးနိုင်တဲ့ အနေအထားပေါ်လိုက်ပြီးသုံးကြဘာစေလကွယ်- ရှေဒနာထားရမပေါ့။
မင်းဒို့ ငါဒို့ ဆိုသဟာ ဟို ဒို့ ရွှေမန်းတင်မောင်ကြီးရှိုဒလို လေကွာ ဘာတဲ့—
တစ်ခရီးထဲအတူသွားဒဲ့ လှည်းသား ငါးရာ ၊လှည်းသားငါးရာ
ဟဲ ဟဲ မိသားစုစိတ်ကိုမွေးကာ ညီညာပါဂျောင်း—- အေးအတူ၊ အကုန်ယူ ဂျ —- ဂျ ဂျ ။
အလဂါးပေးမည့် ဟာဒေါ့ စောင့်ကြဘာအုန်း။ တိုးတက်မှု ရှို ဒါ တစ်ဆင့်ခြင်းမှ ခိုင်မှာကိုးခင်ည။
ယောင်လို့နော်…MPT ကမျက်လှည်.တွေကြည်.ပြီး အီးထွက်သွားတယ်….
ကိုိလိုချင်သလို ဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူး…. နေပလေ့စေ…
ဒီကောင်တွေ ဒို့ကိုမှမရောင်းရင်… သူ့ပထွေးပေါက်ဖော်ကိုပြန်သွင်းလို့ရမှာ လဲမဟုတ်ဘူး
MPT urgently announced at today, we may pay the cheaper GSM mobile phones (3 Lkhs) on5March, 2012 or we may pay on end of March, 2012 or we may pay if we want to pay to all of Myanmar nationals, and then we don’t pay anybody if we don’t want to pay.
So don’t make any comments on us about GSM mobiles.
Remark : (only joke for readers from)
Wait under 5000 Kyats Mobile phone.